When planning to buyahouse, it's very important to consider the surrounding neighborhood as well as the home itself. If you are someone who fancies havingaquiet life equipped while still having access to all the modern facilities, living in gated communities could be the right choice for you. A gated community isaform ofahousing estate or residential community that is guarded and enclosed within walls or fences.
Here are common benefits of living inagated community:
အိမ်ဝယ်ဖို့စဥ်းစားတဲ့အခါ အိမ်နဲ့ပတ်သတ်တာတင်မကပဲ နေမယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ထည့်သွင်းစဥ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ခေတ်မီတဲ့ လူနေမှုပုံစံနှင် အဆောက်အအုံ တွေမှာနေထိုင်ဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုရင်တော့ Gated Community တွေမှာ နေဖို့ သင့်လျော်ပါတယ်။ Gated Community ဆိုတာက တံတိုင်းများ သတ်မှတ်ကာရန်ထားပြီး ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်လုံခြုံရေးကြီးကြပ်ကန့်သတ်မှု ထားရှိတဲ့ လူနေမှုအသိုင်း (သို့) အိမ်ရာဝန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gated Community မှာ နေထိုင်ခြင်းရဲ့ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Inagated community, safety and security are accordedavery high priority. Fixed entrance and exit points are specified which means only verified residents and guests can enter the community and also reduce unauthorized vehicle and foot traffic. Key locations are manned inaperpetual manner, CCTV surveillance and access control ensure complete peace of mind.
Gated Community တွေမှာ ဝင်ပေါက် ထွက်ပေါက်တွေကို သေချာသတ်မှတ်ထားပြီး ဧည့်သည်များကို စီစစ်ပြီးမှ ဝင်ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့ အိမ်ရာဝန်းအတွင်းနေထိုင်သူများသာ ဝင်ရောက်နိုင်တာမလို့ လုံခြုံမှုနဲ့ လုံခြုံရေးကို ကိုက်ညီအောင် အထူးဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အဓိကနေရာတွေကို CCTV နဲ့ သေချာစောင့်ကြပ်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အတွက် အေးချမ်းလုံခြုံမှုကို ရရှိနိုင်မှာပါ။
INTEGRATED LIFESTYLE ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လူနေမှုပုံစံ
One of the very convenient part of living inagated community is not justaplace to go home to, butasanctuary where one can haveawell-rounded and healthy living lifestyle. And for those withaproclivity toward physical activities, life inagated community could be perfect for you, things like gym, golf courses, tennis courts and swimming pool. Design of common, public areas and parks are intended to encourage residents to come out of their homes, and to interact, thereby fostering the community spirit.
အများသုံး ဧရိယာများနဲ့ ပန်းခြံတို့ သတ်မှတ်ထားရှိထားတာကြောင့်လည်း အိမ်ရာဝင်းအတွင်နေထိုင်သူများအတွက် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တွေ့ဆုံရင်းနှီးမှု ရှိစေပြီးတော့ နွေးထွေးတဲ့ အသိုက်အမြုံတစ်ခုလို ဖြစ်တည်နေပါတယ်။ အိမ်ရာဝင်းတွေက လူနေမှုအဆင့်အတန်းကောင်းမွန်ပြီး ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံ ရရှိနိုင်တဲ့ နားခိုရာလေးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အားကစားကို ဦးစားပေးလိုက်စား သူများအတွက်လည်း gym၊ ဂေါက်ကွင်း၊ တင်းနစ်ကွင်းနဲ့ ရေကူးကန် စတာတို့တပါတည်းပါတဲ့ အတွက်ကြောင့် အိမ်ရာဝင်းတွေမှာ နေထိုင်ဖို့ အထူးသင့်လျော်လှပါတယ်။
Safe Play for Children ကလေးတွေအတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
A gated community not only providesacapacious environment to stay in but additionally offers huge open playgrounds and pleasant provisions that are as secure as they get. Limited traffic and slower speeds make the roads safer. Controlled access to the neighborhood means that there are less strangers to worry about. Purpose built facilities and areas for children keep them occupied and safe. A combination of factors make gated communities safer places for children to play.
ကျယ်ဝန်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်သာမက ကလေးများအတွက် ကစားကွင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ မြန်နှုန်းသတ်မှတ်ထားချက်နဲ့အတူ ကားအသွားအလာနည်းတာ၊ လူအဝင်အထွက်စောင့်ကြပ်ကြီးကြပ်မှုရှိတာ အပြင် ကလေးတွေအတွက် ရည်ရွယ်သတ်မှတ်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ စနစ်တကျနေရာတွေလည်းရှိတာကြောင့်ကလေးတွေ လုံခြုံပျော်ရွှင် ဆော့ကစားလို့ ရမယ့်နေရာတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
Greener Environment စိမ်းလန်းစိုပြည်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်
Most of the gated communities include gardens and other types of greenery all around the area. These things not only offeramore “close to nature” feel but also make the environment more fresh and healthy. Presence of trees and shrubs in these green open spaces ensure you are constantly breathing clean air. Everything is well maintained. So you don’t have to compromise on healthy living at any time.
Gated Communities အများစုက ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုကောင်းကောင်းလုပ်ထားပြီး ဥယျာဥ်ပန်းခြံတွေပါဝင်ပြီးစိန်းလန်းစိုပြည်နေတဲ့ သစ်ပင်ပန်းမံတွေကြောင့်လည်း လေကောင်းလေသန့်ကိုရရှိနိုင်တဲ့အတွက်လည်း ကျန်းမာလန်းဆန်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ရရှိမှာ အမှန်ပါပဲ။
If you are targeting to buyareal estate inasafe community, friendly neighbourhood with international quality education and healthcare, we haveawide variety of options for you to choose from condo to townhouses to villas that can address the needs of the modern home-seekers. If you would like to know what are your options and home loan availability at Pun Hlaing, do contact us at Enquiry: +95 (9) 777229449 Email: punhlaingsales@yomaland.com
ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်လျောက်မှုအတွက် အဆင့်မြင့်ဆေးရုံနဲ့အတူ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ကျောင်းတို့ ရှိတဲ့ အေးချမ်းလုံခြုံပြီး ရင်နှီးဖော်ရွေတဲ့ အသိုက်အဝန်းတစ်ခုမှာနေထိုင်ဖို့ ရည်မှန်းထားတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် ပန်းလှိုင်အိမ်ရာမှာတော့ Condoတွေကနေစပြီး Villas တွေအပြင် Townhousesတွေပါ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်နှင့် အိမ်ရာချေးငွေအတွက်သိရှိလိုပါက 09 777229449 ကို ဆက်သွယ်နိုင်သလို punhlaingsales@yomaland.com ကိုလည်း email ပို့စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ Facebook page: https://www.facebook.com/punhlaingestate
https://www.facebook.com/houseforsale.punhlaingestate သို့လည်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။